China ul Emergency LED Phuma Izibane combo ukwenziwa kunye nefektri | Saselux
Lobukhulu: 500 * 184.5 * 108.34mm
① [Imigangatho yase-US] Isixhobo sokukhanyisa uphawu oluphuma ngokukhawuleza sineziqinisekiso ze-UL. Yenziwe ngezindlu ze-thermoplastic ezenziwe ngenaliti. Ukulinganisa ilangatye ye-UL-94V-0, enganyangekiyo ngumlilo. I-120V-277V AC yokusebenza kwamandla ombane. Olu phawu lwentengiso luphuma kakhulu ekubekeni kwiminyango, iziqithi, irestyu, isakhiwo seeofisi nakwindawo zokugcina iimpahla. Utshintsho lovavanyo kunye nesalathiso sentlawulo kuvavanywe ngokungqongqo.
Easy [Kulula ukuyifaka] Ukukhanya kophawu olungxamisekileyo lokuphuma kunokuba sisilingi okanye udonga lubekwe. Zonke izixhobo ziya kulungiselelwe wena. Isetyenziselwa ukufuma, kodwa kungabi manzi, kwaye imeko zomile; lobushushu yokusebenza 0-40 degrees Celsius. Ukuba awuyazi indlela yokuyisebenzisa, pls nxibelelana nathi.
③ [UkuPhuma kweNgcali ye-Lighting ye-LED] Isikhanyisi esiphuma kwisibane sokukhanya esingxamisekileyo sakhiwe kwi-3.6V Nickel cadmium ibhetri yogcino ubuncinci kwimizuzu engama-90 yokusebenza okungxamisekileyo kwexesha lokuphinda uzalise, 0 ℃ -40 ℃ indawo emanzi engaphakathi edwelisiweyo. Isidingo sayo iiyure ezingama-24 ukubiza.
④ [Iiyure ezingama-50000 zoBomi] iiyure ezingama-50000 zokuphila kunye namaxesha angama-300 ehlawuliso ejikelezayo, ibhetri e-back-up inokuphinda iphinde iphinde iphinde isebenze kangangemizuzu engama-27000 ubuncinci. Iwaranti yonyaka emi-5 yamalungu ombane kunye nezindlu, iwaranti yeminyaka emi-3 yebhetri. Izixhobo ezinokuthenjwa zokukhanyisa izixhobo ezingxamisekileyo.
Application [Isicelo kunye neNkonzo] Isibane sokuKhanya kuKhanya kuKhanya kungasetyenziswa kwisekethe ye-120V / 277V, njengendawo yokuhlala, intengiso kunye nezibane zorhwebo, ezilungele ipaseji, ipaseji, isibhedlele, amagumbi, iivenkile ezinkulu, izikolo, iihotele , iivenkile zokutyela, iindawo zokugcina impahla, izakhiwo zeofisi, njl. Sinikezela ngenkonzo ye-OEM. Singazilungiselela iimveliso zakho.
Egqithileyo Umgangatho oPhezulu woRhwebo nge-LED ophuma ngaphandle kwezibane
Okulandelayo: IiNtloko ezimbini eziLungelelanisiweyo zoPhuma kwiCombo